Nkwenye ọha na eze na Igwe Igwe Igwe - OMG Solutions
Nkwenye Ọha na Igwefoto Na-ebi Nwa
Nwee ọchị! Igwefoto ndị uwe ojii na-edekọ ha
Odekọ ihe ndekọ vidiyo site na igwefoto ahụ ọ bụghị naanị na-amanye ndị uwe ojii ka ha zaa ajụjụ, mana ọ na-enyekwa ha ngwá ọrụ bara uru iji mata ike na adịghị ike ha. Mmezu ya nwere ike inye aka rụkwaa ntụkwasị obi ụmụ amaala na ndị obodo ime obodo.
Citizensmụ amaala atụkwasịghị ụlọ ọrụ nwere ọrụ maka ichebe ha. Ebubo a na-enyo enyo na ndị uwe ojii obodo na gọọmentị etiti, yana ndị agha na nnabata nke otu ndị na-eme ka chi ọbụbọ, emeghị ka iwepu ụjọ ahụ. Ọ bụrụ na ndị uwe ojii gbasara ntaramahụhụ, ndị ohi, nwute na ndina n'ike nke ndị uwe ojii na ndị a na-enyo enyo ma ọ bụ ndị a na-enyo enyo na-agbakwunye n'ọtụtụ ọdachi, anyị enweghị obi abụọ ihe kpatara ụjọ ụmụ amaala.
Ma ikpe ndị a iji ike mee ihe na-abata ìhè abụghị nanị isi iyi nke obi abụọ n'etiti anyị, banyere ịdị nchebe nke ndị agha nchebe na ikpe ziri ezi. Mkparịta ụka ụmụ amaala na ndị uwe ojii na-eme kwa ụbọchị, ọbụlagodi na mpaghara, enyewo aka na ntụkwasị obi ọha na eze. Ihe akaebe nke a bụ na, dịka enwere ike ịhụ na ọnụ ọgụgụ na - esote, n'etiti 2010 na 2014, karịa 65 pasent nke ndị sonyere na Nnyocha Mba nke Nnabata na Ọhụụ na Nchebe Ọha, kọọrọ ọkwa nke obere ma ọ bụ enweghị ntụkwasị obi na ọchịchị obodo. na ndị uwe ojii na-ebugharị mmadụ.
Dị mfe dịka itinye igwefoto vidiyo na flap nke onye uwe ojii. Teknụzụ dị na ọrụ ọhaneze na, ọ ga - eme, ka o doo anya ihe dị n'ime ya na ịkwụsị ụdị ajụjụ ndị uwe ojii na - ajụ.
Hụta ntụkwasị obi maka ndị uwe ojii
Nyere ọnọdụ a nke enweghị ntụkwasị obi zuru ebe nile, gịnị ka a ga-eme iji dozie mmekọrịta dị n'etiti ụmụ amaala na ndị agha nchekwa ha?
Ruo ugbu a, arụmụka banyere iwusi ike nke ndị uwe ojii obodo na ntụkwasị obi ụmụ amaala na ha elebara anya na otu ndị uwe ojii steeti.
Agbanyeghị, ọ dị mkpa iji mee ka arụmụka mba ahụ site na mkparịta ụka nke nleba anya kachasị mma, nke dị irè ma rụọ ọrụ nke ọma iji dozie mmegbu nke ndị uwe ojii n'ogo mpaghara ma melite ntụkwasị obi ụmụ amaala. Okwu na-adọrọ mmasị bụ iji igwefoto ahụ na-enye ohere ịme vidiyo nke ihe ndị uwe ojii na-eme kwa ụbọchị.
Emebela ọnụ ụlọ nke anụ ahụ n'ọtụtụ mba, dịka nzaghachi maka okwu ntụkwasị obi na ịba ụba nke nrụrụ aka na iji ike eme ihe n'etiti ndị uwe ojii. Na United States, dịka ọmụmaatụ, ọmụmụ nke ndị uweojii na-ahụ maka nyocha nke ndị uwe ojii (ngalaba nyocha nke Ngalaba nke Ikpe) mere na-egosi na ojiji igwefoto ahụ na - eme ka ọ dịkwuo mma ma doo anya na okwu mkpesa ụmụ amaala na njirimara na mgbazi nke ihe dị n’ime. Ọzọkwa, ntule mmetụta abụọ, na Mesa, Arizona, na onye ọzọ na Rialto, California, kwubiri na mmejuputa vidiyo vidiyo, site na igwefoto ahụ, belatara ọnụ ọgụgụ mkpesa ụmụ amaala megide ojiji site na 75 na pasent 60. ike nke ndị uwe ojii mpaghara.
Na mkpokọta, ihe ndị sayensị gosipụtara na teknụzụ ndị a na-eduga otu nsonaazụ ahụ: enwere mmetụta dị mma na akparamagwa mmadụ na-eme mgbe ọ hụrụ na a hụrụ ya. N'echiche a, ọ bụghị sọsọ ụmụ amaala ka ndị uwe ojii na-eme ọfụma mana ndị uwe ojii na-akọ akụkọ dị mma karịa ha na ụmụ amaala mgbe mmejuputa kamera ahụ na-eyi.
Ihe oru a di nkpa na nkpa nke onodu ya, ebe enweghi ntukwasi obi bu nsogbu buru ibu. Agbanyeghị, ọ ga-abụ nnukwu mmejọ ma dị oke ọnụ mbubata teknụzụ nchekwa na-aga nke ọma n'etinyeghị ntọala ụlọ ọrụ zuru oke, ma ọ bụ iwulite akụrụngwa ziri ezi maka mmejuputa ya.
Maka ụlọ akụkụ ahụ iji rụpụta nsonaazụ ziri ezi na nke ziri ezi, ndị omebe iwu, ndị isi ndị uwe ojii na ụmụ amaala ga-atụle atụmatụ na mmụta ndị a mụtara site na mba ndị ọzọ na emejuputa mmemme ndị a.
Ahụmahụ ahụ na-egosi anyị na tupu ịkọwa arụmụka ahụ, anyị ga-eburu n'uche ihe ndị a:
Gosi na ndi isi ndi mmadu na emekorita ihe karie ka ndi obodo bu ndi n’eji igwe n’ewe ha maka ha nwere ike karie ya.
Zụọ ndị uwe ojii ọzụzụ na njikwa igwefoto ahụ, na-adabere n'ụkpụrụ iwu yana akwụkwọ ntuziaka ndị uwe ojii.
Kpoputa iwu mmado nke igwefoto; Dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-aza oku mberede, mgbe imebi okporo ụzọ, njide, nyocha, ajụjụ ọnụ, na mkpagbu. Nwa amaala nwere ikike ịma mgbe a ga-edekọ ya ma chọọ ikike ha na nzuzo mgbe nsogbu dị mkpa.
Gwa ndị uwe ojii okwu, kọwapụta usoro na etu a ga-esi nyochaa ihe ndekọ a, mgbe ịgaghị enwe mmetụta na mmekọrịta ndị ọrụ.
Mepụta otu ọrụ aka nke nwere njirisi doro anya mgbe ị na-agbasa ozi, ọ bụghị naanị iji zere imebi atụmatụ nchebe kamakwa iji hụ na ịnweta ozi na nghọta.
Gbasaa ikike nchekwa mpaghara, site na ịpụ na sava ndị ọzọ ma ọ bụ itinye ego na akụrụngwa nchekwa nchekwa n'ụlọ.
Tọọ iwu mba iji chọpụta mkpocha nke ndekọ vidiyo, dabere na nghọta nke ihe ndekọ edere.
Were usoro nchedo nke cyber ma jiri ụzọ nyocha nke na-akọwapụta eziokwu na enweghị nchịkwa na ndekọ vidiyo.
Gbaa mbọ hụ na ejiri ozi ndị anakọtara site na igwefoto ahụ mee ihe dị ka ntinye aka ma maka nyocha nke atụmatụ nchebe yana maka ịchọpụta mpaghara ohere.
Mepụta njirisi maka ego na ịhazi ọnụ n'etiti ndị ọchịchị ime obodo, steeti na gọọmentị etiti iji hụ na ego na arụmọrụ ndekọ vidiyo a.
Ihe a dị n’elu ga - ekwe omume ma ọ bụrụhaala na mmejuputa ya dabere na ihe akaebe siri ike na usoro nhazi siri ike. Igwefoto ahụ bụ ihe ọzọ enwere ike ịtụgharị na arụmụka nke ndozigharị ndị uwe ojii ugbu a. N'ụzọ dị otu a, anyị nwere ike ịme ihe dị mkpa iji zere, ọ bụghị naanị iji ike mee ihe n'ụzọ gabigara ókè na iji ike karịrị akarị kamakwa ihe omume dị njọ.
Nzuzo 6421 1 Echiche Taa